Safari တွင်ပုံတစ်ပုံကိုနောက်ခံထားရန်။ | ငါက Mac ပါ
Ignatius ခန်းမ | | လဲ tutorial
အသုံးပြုသူအများစုသည်များသောအားဖြင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုသူတို့၏ပင်မစာမျက်နှာအဖြစ်တည်ဆောက်လေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ run လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်လိပ်စာကိုရိုက်စရာမလိုဘဲအကြိုက်ဆုံးတွင်ရှာဖွေစရာမလိုဘဲရှာဖွေမှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသော်ဘရောက်ဇာအများစုသည်ရှာဖွေမှုများကိုတိုက်ရိုက်ခွင့်ပြုခဲ့သည် လိပ်စာဘား၌တည်၏။ သို့သော်လူတိုင်းကချက်ချင်းပဲရှာဖွေရန် browser ကိုဖွင့်မထားဘူး ၎င်းအစားမည်သည့်ဝဘ်စာမျက်နှာသို့မဟုတ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုမှမပါဘဲ၎င်းကိုကွက်လပ်ဖွင့်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်ထို့အပြင် application ဖွင့်ချိန်ကိုလည်းအရှိန်မြှင့်ပေးသည်။ ထိုသုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Safari browser ၏နောက်ခံအနေနှင့်ပုံတစ်ပုံကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
များစွာသောအသုံးပြုသူများမှာ Apple X OSX ဗားရှင်းအသစ်တစ်ခုကိုလွှတ်လိုက်တိုင်း desktop နောက်ခံကိုပြောင်းလဲရန်နှောင့်နှေးခြင်းမရှိသောသုံးစွဲသူများဖြစ်သည်။ အခြားလူများ သင်၏ Mac ကိုပိုမိုတက်ကြွသောပုံပန်းသဏ္ဌာန်ပေးရန်သင်၏နောက်ခံပုံများကိုအစဉ်မပြတ်ပြောင်းလဲလိုသည် နောက်ပြီး Safari ၏နောက်ခံပုံကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်လျှင်။
ပုံတစ်ပုံကို Safari နောက်ခံအဖြစ်ထည့်ပါ
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းလိုသည့်ဓာတ်ပုံတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac screen နှင့်ဆင်တူသည့် resolution ရှိရမည်ကိုသတိရသင့်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက Safari ၏နောက်ခံတွင်ဝမ်းနည်းဖွယ်စတစ်ကာတစ်ခုကျန်စေချင်သည်။ မျက်နှာပြင်၏အနည်းဆုံး 3/4 ကိုဖုံးအုပ်ရန်လုံလောက်သည်။
ကျနော်တို့ Safari ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်မှတက် ဦး ဦးစားပေး.
Preferences အတွင်း tab ကိုနှိပ်ပါ ယေဘုယျ.
အထွေထွေအတွင်းမှာငါတို့ option ကိုရှာရန်ရှိသည် homepage.
ယခုငါတို့ရုံရန်ရှိသည် ပုံကိုဆွဲယူပါ Safari ၏နောက်ခံကိုမူလစာမျက်နှာပြသထားသောနေရာတွင်ထားလိုသည်။
ယခုငါတို့ရုံရန်ရှိသည် Safari ကိုပိတ်ပါ Safari ၏နောက်ခံတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်ခဲ့သောနောက်ခံပုံနှင့်တူသည်ကိုစစ်ဆေးရန်၎င်းကိုပြန်လည်ဖွင့်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » Safari တွင်ပုံတစ်ပုံကိုနောက်ခံထားရန်
Snapnator သည် MagSafe ကို 2016 MacBook Pro သို့ပြန်ပို့သည်
ကလေးငယ်များအတွက်စာရိုက်ခြင်းဆိုင်ရာ Master application သည် Mac App Store သို့ရောက်ရှိသည်